လူ့ဘဝဆိုတာ ခဏ​လေးပါ — Steemit
ပညာသားပါပါ ဆရာမ​တွေကကြားညှပ်​သင်​ပြ​ပြောပြရင်​ လုံ​လောက်​ပါတယ်​..
အို​ကေဘဲ ကြ​တော့..​သောက်​နိုင်​ပြီလို့​ပြော​တော့ ကိုယ်​​တွေပါလိုက်​​သောက်​မိက​ရော
ဒူး​ခေါင်းနာတာ ​လှေခါး​တောင်​မဆင်းနိုင်​ဘူးဗျာ ​ပျောက်​သွားလိုက်​ပြန်​ဖြစ်​လိုက်​နဲ့ ၂နှစ်​​ကျော်​​နေပါပီ ​ဆေးလဲစုံ​နေပီ အရှင်း​ပျောက်​ချင်​ပါတယ်​ ​ဆေးနည်း​လေးသိရင်​ ​ပြော​ပေးကြပါဦး မှန်ပါတယ်ပြောပုံအရဆိုရင်ထွန်းမြတ်သမီးကအရမ်းတော်မဲ့ပုံပဲ ကုမ္မဏီအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူဆိုတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဒယ်ဒီမပန်းတိမ်လွှာကအရမ်းတော်ပြီးထက်မြတ်ပါတယ် သူ့လိုဝန်ထမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာ
"ဟာဒယ်ဒီကလဲဗျာ ကျနော်ကအခုမှ စလုံးရေးစနေတုန်းပါ
"အေးပါသူငယ်ချင်းရာ. . .''
ဒယ်ဒီသွားပြီ. . .''
"သမီးရေ. .သမီး ဒီမှာမောင်စွမ်းထက်အောင်လာတယ်
ပြီးတော့သူကလွှာ့အလုပ်ရှင်. . . . . .
မ.,ကပါတိတ်အနီလေးကိုအကျီ င်္လက်ရှည်အဖြူ လေးနဲ့တွဲဝတ်ထားသည်မျက်နှာလေးကလဲပကတိအတိုင်း
ဘာမှလိမ်းခြယ်ထားခြင်းမရှိခါတိုင်းကုမ္မဏီကိုလာတဲ့ရက်ဆို မျက်နှာကိုမိတ်ကပ်အနည်းငယ်လိမ်းထားသည် အခုပုံစံက မ.,ရဲ့သဘာဝအလှတရားကိုဖော်ပြနေသည် စွမ်းထက်ပြောရင်းဆိုရင်း မရဲ့လက်လေးကိုကိုင်ကာထိန်းပေးလိုက်သည်
"ဗျာ ဒါဆိုကျတော့်ကမှီထားလိုက်နော်" မှီထားလိုက်လို့သာပြောသည်
စောက်ကုလားတွေ ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်နေရအောင် သူတို့ပထွေးအလ္လာစပထင်နေလား အခုချိန်ထိ တိတိကျကျနယ်စပ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်သေးဘူးလား ဒီအစိုးရလုပ်ပုံကတော့ စောက်ကုလားကိုမြန်မာပြည်freeသဘောမျိုးထားနေတာ စောက်ကုလားအကြမ်းဖက်တွေကိုသတ်တော့ တန်းဖိုးရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေထောင်ကျတယ်။
ခိုးဝင်တာနဲအစ္စရေးလို အသေသာပစ်သတ် ...
လီးလိုလို မှိုလိုလို သံခမောက်လိုလို ကိုယ်မေကိုယ်လိုး
ဒီပို့စ်​ကိုမြင်ပြီး မကျေနပ်တဲ့ အံနံဒီ ကောင်တွေကိုလည်း လအုပဲ အရိုး..အဆစ်​​တွေ ကိုက်​ခဲ​နေပါတယ်​...
သိပ္ပံ​ဆေးပညာအရ ​ဂေါက်​ ​ရောဂါလို့​ခေါ်ပါတယ်​ ​သွေးထဲမှာ ယူရီးယား အက်​စစ်​များ ​လို့ ဖြစ်​တယ်​လို့​ပြောပါတယ်​...မြန်​မာ ​ဆေးနည်း​ကောင်းများ ရှိရင်​အမြန်​ဆုံးဖြန့်​​ဝေ​ပေးကြပါ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​...အ​ရေးကြီး​နေလို့ပါ...
#steemit #life #writing #mm
Congratulations @panbagyi! You receivedapersonal award!